<º Gamers: Good Old Games horeyba wuxuu ugu lahaa ciyaaro Linux | Laga soo bilaabo Linux
<º Gamers: Good Old Games horeyba waxay u leeyihiin ciyaaro Linux
Waxay yihiin Link | | Ciyaaraha
Dhowr bilood ka hor Cayaarno wanaagsan oo hore (GoG) ku dhawaaqday inay sii deyn doonto noocyada ciyaaraha laga heli karo dukaankeeda GNU / Linux, oo ay ku jiraan kuwa aan waligood loo sii deyn nidaamkeena. Waa hagaag via Twitter Waxaan ogaadaa inay maalintaas timid, oo aan wax kayar la jirin 50 Cinwaanada.
Kuwa aan garaneynin GoG waa degel aan ka soo iibsan karno ciyaaraha caadiga ah qiimo jaban, oo ugu fiican dhammaan, maya DRM, iyo sidoo kale waxyaabo dheeri ah oo la soo dejinayo (sida waraaqaha waraaqaha la duubo, codka dhawaaqa, iwm.)
Ka mid ah cinwaannada aan helno Duke Nukem 3D: Atomic Edition, Flatout 1 iyo 2 ama Ilbaxnimo iyo sidoo kale, muddo 5 maalmood ah (tirinta maanta) qaar ka mid ah waa la iibinayaa, markaa waa hab fiican, oo raqiis ah, oo lagu iibsado classics. Waxaa sidoo kale laga heli karaa labada xirmo .deb (loogu talagalay Ubuntu) iyo kubbadda cagta kuwa inaga mid ah ee adeegsada nidaamyo kale (kala fur oo tag)
Shaki la'aan, war wanaagsan oo loogu talagalay cayaaraha Linux.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Ciyaaraha » <º Gamers: Good Old Games horeyba waxay u leeyihiin ciyaaro Linux
Waa war wanaagsan, in kasta oo aan durba noqday Ku-tiirsane u-ekaanta Half-Life iyo CS 1.6.
Aynu aragno haddii hal maalin aan hal gelinayno internetka CS 1.6
Waad salaaman tihiin. Link waa war aad u wanaagsan, su'aal badana ma ahan websaydhka loogu magac daray Ciyaaraha Fiicnaa ee Hore?
Cinwaanka waa la saxay.
Yaa, waan wareeray. Waad ku mahadsantahay sixitaankeeda.
Aqoonsiga Steam-ka ee aan isticmaalo waa isla naanaysta aan ku isticmaalo boggan.
Hagaag, kaliya waan aqriyay warka aan isku dayay 2-kulan oo aan leenahay isla jaanqaadka (Stargunner iyo Dragonsphere) oo xoogaa dhaqso ayey ku socdaan (gaar ahaan xanaaqa Stargunner maadaama ay maraakiibta ku saabsan tahay) Weli waa hindise wanaagsan oo ka socda CD Projeckt, waxaan rajeynayaa inaysan ku raagin gelinta Witcher-ka ee aan gacanta ku hayno.
PS: Waxaan u maleynayaa inaadan si sax ah u dhigin magaca bogga, waa Ciyaarihii Hore ee Fiicnaa 😉
Dahabka ciyaaraha?, Ma waxaad u jeedday "Ciyaar wanaagsan oo hore"
Waxaan kaliya ku arkay warka via @tannhauser, waa war aad u wanaagsan, sidoo kale qiimayaashu aad ayey u hooseeyaan, waa inaan taageernaa dadaalkan, marka lagu daro kordhinta weyn ee GOG waana in dhamaan ciyaartooda ay yimaadaan LA'AAN DRM.
Waxaan sugayaa nooca aan la daahin ee Linux;
Ka jawaab qalad
Maaddaama warkan uusan aniga i jeclayn wax badan, waxaan u maleynayaa inaan isku dayi doono dhowr ciyaarood.
Iyo haa ... waa inaan isku daynaa.
Sida loo rakibo barnaamijyada KCP ee KaOS
Abuuritaanka barnaamij Ubuntu Taabasho [QML] - [Qaybta 2]